Soomaalida Maraykanka oo dhaqaalo u uruuriyay Isbitaallo laga dhisayo Goboladda Sanaag iyo Togdheer – Radio Muqdisho
Soomaalida Maraykanka oo dhaqaalo u uruuriyay Isbitaallo laga dhisayo Goboladda Sanaag iyo Togdheer
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Magaalada Columbus Ohio ee Dalka Maraykanka ayaa sameeyay kulan dhaqaalo loogu aruurinayay Isbitaallo loo dhisayo Hooyadda iyo Dhallaanka ee Magaalooyinka Widhwidh iyo Awrboogays ee Goboladda Sanaag iyo Togdheer.
Waxaa kulankan ka soo qeybgalay qeybaha kala duwan ee Bulshadda sida, Culimada, Ganacsatada, Aqoon yahanka iyo Ardayda ,waxaana hadallo qiiro leh oo ku aaddan xaallada ay ku suganyihiin hooyooyinka iyo Carruurta Magalooyinkaasi soo bandhigay Gabdho Soomaaliyeed oo barnaamijkan Hormuud u ahaa.
Dadkii Soomaaliyeed ee halkaasi isigu yimid ayaa fadhiga gudahiisa ku uruuriyay dhaqaale billoow ah oo gaaraya 72,66 Doolar, iyadoo ay tabarucaadda dhaqaale sii socon doonto, taasoo ay iska kaashanayaan Ururro madax bannaan, Dad is xilqaamay iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada.
Qaar ka mid ah Haweenkii halkaasi ka hadlay ayaa xaaladda ku tilmaamay inaysan ahayn mid Indhaha laga qabsan karo, taasoo mudan bay yiraahdeen in layska kaashado sidii Dadkaasi tabaalaysan loo caawin lahaa.
Waxaa kulankaasi muxaadaro ku aaddan qiimaha sadaqada ka soo jeediyay Sheekh Aadan & Sheekh Horseed oo dhamaan Dadka ku boorriyay in ay walaalohood ku sadaqeystaan isna garab taagaan.
Ururka Fowzia Health Foundation oo ah Ururka howshan wada kaalin firfircoonna kaga jira arrimaha samafalka ayaa horay dhaqaalo aruurin noocan oo kale ah uga sameeyay Magaalooyin kale oo ku yaal Dalka Mareykanka , si loo caawiyo Walaalaha Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan Dalka gudahiisa.
Shir looga hadlayo Kor u qaadida Kaabayaasha Dhaqaalaha Dalka oo ka socda Garoowe